Muqdisho: 5 sano oo lagu xukumay nin dharka dumarka kula haasaawi jiray ragga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Maxkamada ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta xukuno kala duwan ku riday labo ruux oo mid shacab ahaa midna uu ka tirsanaa ciidanka xooga dalka Soomaaliya.
Mid ka mid ah labada eedeysane oo magaciisa lagu sheegay Max’ed Xareed Xasanwaxaa lagu helay inuu xirtay dhar dumar, islamarkaana raga kula haasaawi jiray, waxaana lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah, sida uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Liibaan Yarow.
Eedeysanaha labaad ayaa ahaa xidigle Xasan Maxamed ayaa lagu eedeeyey inuu aflagaado u geystay tiliyihiisa, islamarkaana qaatay qalab uu lahaaa saldhiga uu ka tirsanaa, waxaana lagu xukumay 2 sano oo xabsi ciidan ah.
Magaalada Mqudisho ayaa mararka qaar lagu arkaa rag xiran dhar dumar, kuwaasoo arrintaas sababo kala duwan ku kallifaan.